Izazimfundo, abafundi kanye nongoti bezomthetho bethamele iNkuthazokusebenza ebihlelwe yasingathwa iSikole sezoMthetho.
Inkuthazokusebenza ngaphansi kohlelo lwe-Street Law ehlanganisa ongoti bezomthetho abavela emazweni angaphandle kanye nezazimfundo ibihlelwe yasingathwa kamuva nje iSikole sezoMthetho ophikweni lase Howard College.
USolwazi David McQuoid -Mason e-UKZN, ubengomunye obesiza kule nkuthazokusebenza nebihlose ukuthi ihlinzeke ngolwazi olucacile lomthetho wasemgwaqeni kanye nokusebenza kwawo mihla yonke. Lo mthetho uhlanganisa amalungelo abantu, umthetho wabathengi kanye namalungelo kwinhlalo-mnotho.
Umthetho wase mgwaqeni uyaziwa kakhulu e-UKZN ngegalelo lawo lokusebenza. Izindlela zokufundisa lesi sifundo kuhlanganisa: izingxoxo zamaqoqo amancane, impikiswano, izethulo noma izinkulumo kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje obufana no-cyberspace.
Oka-McQuoid – Mason uthe, ‘lowo ongudokotela wezengqondo kwezemfundo ubalule waveza ukuthi ukusebenzisa lezi zindlela ezingenhla zokufundisa kunomphumela omuhle kakhulu’.
‘Imiphakathi iyadinga ukwazi mayelana nalo mthetho ngoba uyasithinta ngezindlela ezingafani ezimpilweni zethu noma ngabe kuthiwa asiqwashile ngawo kwesinye isikhathi’.
UMcQuoid – Mason ubeke wathi, ukufunda ngalo mthetho kusus’inkungu kubafundi ukuba babe namakhono abazowadinga ngesikhathi besebenza njengaba mmeli. Lama khono ambandakanya ikhono lokuba umkhulumeli/ umvikeli, ukulungiselela izingxoxo zomthetho kanye nokuchaza nje umthetho ngolimi olulula.
‘Lo mkhakha womthetho usiza abafundi ukuba bathole ukuzethemba, baxukuz’ugebhezi, kanye nokufunda ukwengamel’isikhathi’.